Blue Lagoon, spa nke agaghị echefu echefu | Akụkọ Njem
Iceland bụ otu n'ime mba kacha dịrị nso na North Pole na obodo mara mma kari ichoputa. Ọ nwere nnukwu ọrụ geothermal, ugwu mgbawa na-arụ ọrụ, oke ọkụ na-apụta site na omimi nke ụwa, nke ahụ pụtakwara na anyị nwere ike ịsị na ọ bụ mba spa n'ihi na ndị Iceland na-eji ihe okike enyere ha nke ọma.
Ala mmiri nke Reykjanes dị nso na isi obodo Iceland, Reykjavik. Ọ bụ akụkụ nke usoro mgbawa ugwu ma dị n'akụkụ ebe efere Europe zutere nke America. N'okpuru ya ka ụwa ka dị ndụ, ọ na-asụ ude, ọ na-agagharị ma lava na-asọba site na okpuru mmiri. Ejiri ike dị egwu nke ikuku dị ike nke na-ewepụta ume maka ọtụtụ nde mmadụ na-eji ike dị ukwuu eme ihe ma n'otu oge ahụ na-ekpo ọkụ mmiri nke nnukwu ọdọ mmiri ị hụrụ na foto a: Blaa Ionio o Osimiri ọdọ mmiri Iceland.
1 Blue Lagoon Atụmatụ
2 Otu esi aga Blue Lagoon
3 Gaa Lagoon Blue
4 Nọ na Lagoon Blue
Blue Lagoon Atụmatụ
A na-atụle Blue Lagoon otu n'ime 25 ebube n'ụwa Ma ị gaghị enwe ike ịga leta Iceland na-enweghị mmiri banye na ya. A haziri otu ụlọ ọrụ ndị njem nleta nwere ebe obibi, ụlọ nri, ebe a na-elekọta spa na ọrụ dị iche iche n'akụkụ isi iyi ndị a na-ekpo ọkụ. Ọ dị mkpa ịhazi ọbịbịa ahụ, zụta tiketi, debe ebe obibi ma ọ bụ chee nke ọma ihe anyị ga-eme ma ọ bụrụ na anyị kpebie ịbịaru ebe a na-arọ nrọ.
Mmiri Geothermal malitere ihe dị ka mita 2 n'okpuru ala, ebe mmiri dị mma jikọtara na nnu nnu na oke okpomọkụ. Mgbe ha pụtara mmiri dị n'etiti 37 na 40 ºC, na ha bụ bara ọgaranya na mineral dị iche iche, gụnyere sọlfọ na silicate. Bụ ọ bụghị ọdọ mmiri nkịtị kama nke ahụ, ọ bụ nwoke wuru ya n'akụkụ ebe a na-emepụta ihe ọkụkụ na-enye ọkụ. Mmiri nke na-apụta n'osisi a na-aga na lagoon ma na-emegharị ọhụụ ihe dị ka awa 48 ọ bụla. Ọdọ mmiri ahụ nwere ihe dị ka nde lita mmiri isii ma rute omimi nke di n’agbata mita 1.2 na 1.6.
Na osisi ahụ, a na-ekpuchi mmiri site na mmiri lava na-agagharị ma jiri ya mee ka nnukwu turbines na -emepụta ọkụ eletrik na mmiri na uzuoku a na-eme ka ọ ghọọ kpo oku maka obodo niile. Ozugbo emechara usoro a, mmiri ahụ na-ejedebe na Blue Lagoon, nke ghọrọ a ebe jupụtara spa spa. Eziokwu bụ na mmiri nwere ọtụtụ mineral, oke dị elu, na enweghị ike iji ya mee ihe ọzọ ka a ga-atụfu ya ebe ọ bụ ya mere eji wuo ọdọ mmiri ahụ, n'ọhịa lava dị nso. Ọ bụ kpomkwem elu ịnweta ọdịnaya na-enye mmiri na otu milky-acha anụnụ anụnụ ụda.
Ekwesịrị ikwu na mpaghara lava nwere oke ọkpụrụkpụ nke na-enye ohere ka ọ bụrụ nke a na-apụghị ịkọwapụta, mana ka oge na-aga, ọ gaghị ekwe mmekpa ahụ ka ndị Iceland ga-egwu olulu / ọdọ mmiri ndị ọzọ iji zipu mmiri. Ihe niile dị na Grindavik, ihe dị ka kilomita 20 site na ọdụ ụgbọ elu mba Keflavik, nke kachasị mkpa na mba ahụ, na dị naanị kilomita 39 site na isi obodo. Zọ a ọ dị mfe iru ebe a, ma ị gbaziri ụgbọ ala ma ọ bụ site na njem ọha na eze.
Otu esi aga Blue Lagoon
Eziokwu bụ na kwa mfe. E nwere okporo ụzọ awara awara na isi obodo Reykjavik na Keflavík na akara aka na-egosi ụzọ. Site n'ụgbọala site na isi obodo ọ ga-abụ ihe dị ka nkeji 50, ọ nweghị ihe ọzọ. Ọzọkwa enwere bọs na-ejikọ Blue Lagoon na isi obodo na ọdụ ụgbọ elu Keflavík. Nwere ike were tagzi n'ihu ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ n'obodo. Ebe a na-ekpo ọkụ nwere nnukwu ebe a na-adọba ụgbọala na ọnụahịa maka ịhapụ ụgbọ ala ahụ gụnyere ego ntinye.
Ọ bụrụ na ị na-eji akpa akwa ma ọ bụ akpa azụ njem, etiti ahụ nwere ụlọ nchekwa akpa iji chekwaa igbe nke ụdị ọ bụla. Ọ dị nso na ebe a na-adọba ụgbọala ma na-efu naanị euro 3 kwa akpa ma ọ bụ ngwugwu.
Gaa Lagoon Blue
Oke Osimiri Blue emeghe niile n'afọ mana odi nkpa idebe dika otutu ndi nleta. Ejila ndoputa. Na mkpokọta, etiti ahụ na-emepe site na 8, 9 nke ụtụtụ wee mechie n'etiti 8 na 10 n'abalị. Ọ dabere na oge nke afọ. Ugbu a, site na Jenụwarị ruo Mee, awa ndị ahụ na-amalite site na elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere asatọ nke abalị, n’agbanyeghi n’oge ezumike ekeresimesi ọ ga-emechi n’oge. Ozugbo o mechiri, ndị ọbịa nwere ike ịnọ naanị ọkara awa. Biko rịba ama na n'ihi ọrụ mmezigharị, a ga-emechi etiti ahụ site na Jenụwarị 9 ruo 8, 5. A na-atụ anya na mgbanwe zuru ezu ga-agwụ na 21.
N'ime ụlọ ọrụ ọkụ hay ime ụlọ ebe ị nwere ike ịgbanwe uwe, n’otu aka nke ụmụ nwanyị ma n’aka nke ọzọ otu nwoke. Ha bụ oge a, saa mbara ma nwee onwe nzuzo ịhapụ ihe onwunwe gị. Mgbaaka ha nyere gị mgbe ị na-akwụ ụgwọ ọnụ ụzọ ahụ bụ igodo kọmputa dị na mkpuchi ahụ ma n'otu oge ahụ na-amata gị mgbe ị na-akwụ ụgwọ ihe ọ drinksụ drinksụ na nri ka ị na-enwe spa. Mgbe ị hapụrụ mgbaaka ahụ, mgbe ị na-apụ, ị na-akwụ ụgwọ ihe oriri gị niile.
Blue Lagoon bụ siri ike banyere ịdị ọcha yabụ ị ga-awụsa tupu ịbanye ọdọ mmiri. Enwere mmiri ozuzo onwe gị na ụlọ ndị a na-agbanwe agbanwe ma ị ga-eji ha na-enweghị akwa ịsa ahụ. N'ime mmiri ahụ, e nwere ncha ntutu na ncha na ntutu ntutu. Enwekwara ndị na-ehicha ntutu maka mgbe ị na-apụ. Ha nweere onwe ha iji. Se ha na-agbazite akwa nhicha ahụ na ebe a na-asa ákwà, obu ezie na inwere ike iweta nke gi.
na ndị nwere nkwarụ nwere ike ịga na Blue Lagoon Nakwa n'ihi na etiti ahụ nwere nnukwu mbuli elu nke na-eduga n'ọnụ ụzọ ọdọ mmiri ahụ, enwere oche nkwagharị ndị na-abụghị nke nwere ike ibute n'ime mmiri ahụ, mkpọda ebe niile na ọnụ ụlọ ndị ọzọ sara mbara ma na-agbanwe agbanwe. N'ikpeazụ, eyikwasịla ọla n'ihi na mmiri ahụ ga-emetụta ha, na-eji ntutu ntutu mgbe niile n'ihi na mineral na-eme ka ọ taa nnukwu, na-adị ọcha n'ihi na ịnọ na mmiri ọkụ ruo ogologo oge na-akpata akpịrị ịkpọ nkụ ma weta ugogbe anya maka anwụ n'ihi anwụ mmiri dị ike.
N'ime ogige Blue Lagoon enwere ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nke e wuru n'ime nnukwu ugwu, ụlọ oriri na ọeterụeterụ na ebe a na-ere mmanya. N'ikpeazụ,Ego ole ka otu ụbọchị na Blue Lagoon na-efu? Enwere uzo dị iche iche: Standard, Comfort, Premium na Luxury. Ihe dị iche bụ iji akwa mmiri, akwa nhicha ahụ, ihe ọ drinksụ drinksụ, inwe usoro nlekọta anụ ahụ, tebụl echekwara na ụlọ oriri na ọ restaurantụ andụ na ụdị ihe ahụ. Ọkọlọtọ na-efu euro 35, Comfort 50, Premium 65 na Luxury 165 euro.
Nọ na Lagoon Blue
A kwes center na Iceland e nwere nkwari akụ, na Llọ Ọgwụ Clinic Blue Lagoon nke dị naanị nkeji iri site na mmiri ahụ. O nwere ọdọ mmiri nke onwe ya ma na-anabata ndị ọbịa ya kwa ụbọchị site na elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere 10 nke abalị. Ewubere ya na nkweko zuru oke na gburugburu ya ma buru ezigbo ohia. Standardlọ oriri na ọ costsụ costsụ na-efu euro 250 na ime ụlọ okpukpu abụọ na-efu euro 300.
Ọnụego ya gụnyere abalị nke ebe obibi, ụtụ isi na ọrụ, nri ụtụtụ, ọnụ ụzọ ụlọ nkwari akụ, WiFi na mgbatị ahụ. Hotellọ nkwari akụ ahụ awade ụlọ 35 na mbara ihu nkeonwe na echiche mara mma nke ubi lava. Roomslọ niile nwere ime ụlọ ịwụ ahụ nke nwere ịsa ahụ, telivishọn, ekwentị, minibar na akwa nhicha ahụ. Ọ na-enye ụlọ ịhịa aka n'ahụ.
N'ikpeazụ, tupu ị pụọ, ị nwere ike ịkwụsị site na ụlọ ahịa ma were ụfọdụ ngwaahịa nlekọta anụ gị. Dịka ọmụmaatụ, ude aka na-efu euro 35, dịka ọmụmaatụ, yabụ enweghị ọnụ ahịa dị oke ọnụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Islandia » Blue Lagoon, spa nke agaghị echefu echefu
Emechara m nso Iceland wee gafee Blue Lagoon.
Ọ bụ n'ezie saịtị nke overrated.
O juputara na akwukwo ndi bekee nke Britain, Waterfront Bar na-achu Beer, na otutu ulo ahia na ulo nri, o kariri ibu ebe di nwayo ma zuru ike.
Enwere ọdọ ọzọ dị na North na mpaghara Myvatn, nke pere mpe ma pere mpe ma nwekwaa obi ụtọ.
Ọ masịrị m nke ukwuu.
Etu ị ga-esi anụ ekeresimesi na Madrid na 2015